माओबादी केन्द्रको एजेण्डा नै मेरो जित ः खांन::elumbinikhabar.com
सिद्धार्थनगरमा यहाँको उम्मेदवारी किन ?
फैज अहमद खांन नगर प्रमुखका उम्मेदवार माओबादी केन्द्र सिद्धार्थनगर नगरपालिका
जनताको सेवाका लागि नै मेरो उम्मेदवारी हो । बर्षौदेखि विभिन्न शासकले नगरको नेतृत्व लिए पनि यहाँंको विकासमा ध्यान नदिएकाले हराभरा नगर बनाउन मैले सोच राखेर नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको हुँ । अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने नगरको प्रत्येक स्थान र संरचनाहरु जीर्ण छन् । हिजोका शासकहरुले नगरलाई लुट्ने काम गरे तर थोरै पनि जनताको पक्षका काम गर्ने सोच राखेनन् । सिद्धार्थनगर भन्दा पछि स्तरोन्नति भएका अन्य शहरहरु अहिले धेरै माथि पुगे तर यहाँका नेतृत्व पंक्तिहरु नगरलाई चुसेर खान पल्किए पनि विकास निर्माणमा पछाडि पारेका छन् । अब मैले यहाँको विकास निर्माण तथा नगरलाई आधुनिकीकरणमा रुपान्तरण गर्दै यहाँको जनताको जीवनस्तरलाई समेत माथि उठाउने प्रतिबद्धता गरेको छु । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकासका लागि सिद्धार्थनगरमा मेरो उम्मेदवारी परेको हो ।
नगर प्रमुखको लागि तपाई के कारणले योग्य हुनुहुन्छ ?
यो देश परिवर्तन गर्ने माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि भएकाले म के कारणले योग्य छु भनिरहनु नपर्ला । हिजो राजतन्त्रको पाउमा दाम चडाउनेहरुलाई गणतन्त्रमा परिवर्तन गर्ने पार्टी माओवादी केन्द्र नै हो । राजतन्त्र बिनाको नेपाल परिकल्पना गर्न नसक्ने धेरै बुद्धिजीवीहरुलाई रुपान्तरण गर्ने पार्टी पनि माओवादी नै हो । यो पार्टीको कार्यकर्ता भएका नाताले म यो नगरको परम्परागत रुपमा चलेको निरन्तरतालाई जनताको भावना अनुसार परिवर्तन गर्न सक्ने व्यक्ति भएकाले पनि नगर प्रमुखमा म योग्य भएको हुँ । यो नगरलाई स्मार्ट सिटिको रुपमा विकास गराउँदै सुन्दर र सफा बनाउने मेरो प्रतिबद्धताले पनि म अन्य उम्मेदवारहरु भन्दा सोचले र कृयाकलापले योग्य रहेको छ । हिजोको सिंहदरबारलाई आज गाउँगाउँ सम्म पु¥याउने हाम्रो पार्टीका विकसित नेपालको सोच र एजेण्डाका कारण पनि म सिद्धार्थनगरका लागि योग्य नगर प्रमुख हुँ ।
निर्वाचनमा विजय भए सिद्धार्थनगरलाई कस्तो बनाउने सपना यहाँको छ ?
महामानवको जन्मस्थान लुम्बिनीको प्रवेश नगरी हाम्रो सिद्धार्थनगरलाई हराभरा, शान्त र सुन्दर बनाउने मेरो सपना छ । विश्वले चिन्ने ग्रिन सिटिको विकासकालागिपहिलो सोचमा म छु । जनताको प्रत्यक्ष समस्याहरु लाई तुरुन्त न्युनिकरणका लागि मेरो प्रयास अग्रस्थानमा रहनेछ । बुटवल भैरहवाको सिक्स लेन सडकका कारण बाटो क्रसमा जनतालाई परेको समस्या समाधानका लागि आकासे पुल निर्माण, आर्थिक विकास तथा जनताको चाहानालाई पुरा गर्न संस्थागत उज्यालो अभियानमा साथ दिदै पूर्ण रुपमा सिद्धार्थनगरलाई लोडसेडिङ मुक्त नगरको परिकल्पना मेरो रहेको छ । सफा सुग्घर नगरको विकासका लागि प्रयास अगाडि बढाउने छु । खानेपानी, सडक, सञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षामा पूर्ण रुपमा नगरको ध्यान केन्द्रित गर्ने मेरो योजना रहेको छ ।
नगर प्रमुखमा यहाले जित्ने भरपर्दो आधार के छ ?
नगर प्रमुखमा मैले जित्ने आधार भनेको नै माओवादी केन्द्रका एजेण्डाहरु नै हुन । जुन एजेण्डाले जनताले परिवर्तन देख्न पाएका छन् । बिस्तारै महशुस गर्ने स्थानमा जनता आईपुगेका छन् । माओवादी जनयुद्धका कारण प्राप्त उपलब्धिहरुको संस्थागत विषयबस्तुहरु दलित, मधेसी र महिलाहरुका लागि समावेशी आधारमा विभिन्न स्थानमा अवसर प्रदान गर्ने नै हाम्रो पार्टी हो । संबिधान सभा बाट जनताको संविधान निर्माण गर्ने पार्टी पनि माओवादी केन्द्र नै हो । सिंदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा ल्याउने पार्टी पनि हाम्रो पार्टी भएकाले मैले जित्ने आधारको मुख्य कडी पार्टीको एजेण्डा हो । यसको अलावा म यस नगरको इमान्दार र स्वच्छ छवि भएको नेताका कारण पनि जनताले मलाई भोट दिने भएका हुन् । हिजोका सामन्तहरुको अवशेषहरुको अन्त्यका लागि समेत जनताले मलाई जिताउने आधार देखिएको छ ।
यहाँको मुख्य प्रतिस्पर्धा कुन दल संँग हुन्छ होला ?
यस नगरमा अहिले माओवादी केन्द्रलाई जित्ने कुनै राजनीतिक शक्ति देखिएको छैन । हिजो हामी कमजोर जस्तो देखिए पनि अहिले हाम्रा एजेण्डा जनता माझ पु¥याउँदा हामी अरु भन्दा धेरै अगाडि देखिएका छौँ । हाम्रो पार्टीका जनमुखी कामहरुले पनि जनताहरु अहिले माओवादी केन्द्रको पक्षमा उभिएका छन् । हाम्रो अभियानमा स्वतस्फूर्त रुपमा हजारौँ जनसहभागिता रहेको छ ।
चुनावी गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ?
अहिले हामी माओवादी केन्द्रको सिद्धान्त बोकेर जनताको घरदैलोमा पुगेका छाँै । हामीले गरेका राम्रा नराम्रा काम जे छन् मुल्याङ्कन गरिदिन समेत जनतालाई अनुरोध गरेका छाँै ।
हिजोका शासकहरुको मुल्याङ्कन गर्न समेत हामीले जनतालाई अपिल गरिरहेका छौँ । देशको परिवर्तनकारी शक्ति र आधुनिक नेपालको परिकल्पनाकार शक्ति माओवादीलाई जिताउन समेत हामीले जनता समक्ष पुगेर मत मागेका छौँ । स्थानीय स्तरमा हामीले पार्टीका वडा कमाण्डरहरुलाई वडा स्तरमा र नगरका कमाण्डरहरुलाई नगर क्षेत्रमा पुगेर जनतालाई पार्टीको विचार र एजेण्डाको बिषयमा जानकारी गराएका छाँै । घरदैलो, चुनावी सभा, अन्र्तक्रिया र व्यक्तीगत भेटघाटमा हाम्रो गतिविधि अगाडि बढेको छ ।
चुनाव प्रचारमा जनताको सद्भाव यहाँलाई कस्तो रहेको छ ?
हाम्रो अभियानलाई जनताले साथ दिएका छन् । हामी जहाँ जहाँ पुग्छौँ । त्यहाँका जनता आफै स्वतस्फुर्त रुपमा हामीसंँगै माओवादी केन्द्रको हसिया हतौडामा भोट हाल्न आफ्ना छिमेकीहरु आफन्तहरु र साथीभाईहरुलाई आग्रह गरेको देखिन्छ ।प्राय हामी पुगेका ठाउँमा घरघर बाट जनताहरु हाम्रो घरदैलो कार्यक्रममा सरिक भएका छन् । माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरुलाई विजयी बनाउन सक्दो सहयोग गर्न तयार रहेका अभिव्यक्तिहरु समेत जनताले दिएका छन् । परम्परावादी सोच भएका पार्टीको विकल्प माओवादी केन्द्र भएकाले पनि यसको विजय आवश्यक जनताले देखेको हामीले पाएका छौँ ।
सिद्धार्थनगरको खास समस्या यहाँले केके देख्नुभएको छ ?
यस नगरमा हजारौँ समस्याहरु देखिन्छन् । डुबान, बाटो, ढल, सुन्दरीकरण, हरियाली जस्ता समस्याहरु नगरमा छन् । म नगर प्रमुखमा विजयी भएपछि जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका बिषयहरुलाई तत्काल र शहरको सुन्दरीकरणका लागि दीर्घकालीन सोच राखेर मैले काम गर्ने योजना बनाएको छु ।
नगर प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने क्रममा
कस्ता एजेण्डा बोेकेर यहाँ जनता माझ जानुभएको छ ?
जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन र विकास मेरा व्यक्तीगत एजेण्डाहरु हुन भने पार्टीका एजेण्डाहरु हाम्रा मुख्य एजेण्डाहरु हुन् । यी एजेण्डाहरुका आधारमा यस नगरको विकास गर्ने प्रतिबद्धताका साथ हामी जनता माझ पुगेका छौँ ।
सिद्धार्थनगरबासीले यहाँलाई किन भोट दिने ?
नगरको विकास, सामान्तवादको अन्त्य , सामाजिक सद्भाव कायम राख्न, सबै समुदाय बिचमा मेलमिलाप र भाईचारा कायम गर्न सिद्धार्थनगरबासीले मलाई भोट दिनुपर्दछ । यसको अलवा यहाँको आर्थिक क्षेत्रको विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारमा मेरो महत्वपुर्ण अभिभारा रहेकाले मलाई भोट दिनुपर्दछ ।